QORMOOYIN SOOMAALI AH - Ka Akhriso Qormooyin & Qoraallo Xiiso Leh
QORMOOYIN SOOMAALI AH
Ka Akhriso Qormooyin & Qoraallo Xiiso Leh
Waa Illaahay Mahadii Mar Hadaanan Arkeyn…
Laba reer oo isla deganaan jiray, ayaa joogto isu dili jiray, haddana marka ay damcaan iney colaadda damiyaan, waxay isku sheegan jireen diyo ama mag. Diyadu waa qaali, oo waxaa la isku tirsanayaa inta qof ee uu dhinac walba dilay iyo inta laga dilay, halkii qofna waxaa laga bixiyaa boqol neef oo geel ah, caadaduna…
Sii Akhri… “Waa Illaahay Mahadii Mar Hadaanan Arkeyn…” »
Sheeko: Laangadhe Macruuf
Xasan waxa uu ahaa Nin Hargeisa ka tegay isaga oo aad u yar, dabadeedna Caddan edadii loogu geeyey, Xasan mudo markuu Magaalada Caddan ee Junuubka Yeman deganaa ayuu halkaa iskuul ay edadii geysay uu cabaar ku dhigtay, Xasan wuxuu jeclaa inuu Markaakiibta raaco oo uu Dalalka Yurub tago, Xasan Magaaladii Caddan wuu ka tacabiray, markiibana…
Sii Akhri… “Sheeko: Laangadhe Macruuf” »
Bal Inta Uu Le’eg Yahay Ee Uu Xamar Doonayo Eega !!!
Suuqa Hargaysa ayey beri hore ka dhacday: laba tuug oo xarfaan ahi ay nin lacag kala baxeen, markii uu Ninkii dareemay in lacagtii laga xaday, ee uu is yidhi hadal, ayay labadii Tuug caqli keeneen, oo ay wanjaleen ninkii, inta ay dhirbaaxo la dhaceen ayay kor u yidhaahdeen “Kelebka xumi bal inta uu le’eg yahay…
Sii Akhri… “Bal Inta Uu Le’eg Yahay Ee Uu Xamar Doonayo Eega !!!” »
Magaalada Lafaciise waxa ay 36 KM dhanka waqooyi ka xigtaa caasimadda Degaanka Soomaalida ee Jigjiga. Sida oo kale waxa ay degmada Awbarre ee ay ka tirsantahay u jirtaa 40 KM. Waxaa lagu qiyaasaa in magaalada la degay 1948-dii. Balse waxaa rasmi ah magaalo ahaan loogu degay 1952-dii. Intaa wixii ka horreeyey waxa ay ahayd goob…
Sii Akhri… “Magaalada Lafa-Ciise” »
Daruuraha iyo Roobabka miyaa la kala xadi karaa?
Sannadkii 2016 kii ayaan Wargeyska Geeska Afrika ku baahiyey qisada dalka Iiraan oo markaas ka cabanayey, in Israa’iil ay ka xadday daruuro roob ay ka filaysay. In kasta oo ay markaasba dad aad u badan la noqotay wax aan dhici karin, haddana sida cilmiga aadamuhu u gaadhay in uu roob samaysto, sida oo kalana ma…
Sii Akhri… “Daruuraha iyo Roobabka miyaa la kala xadi karaa?” »
Nin Doofaar Jiidhay!
Nin baa isaga oo habeen guuraynaya, oo reerkiisa u socda, ayaa ay doofaarro ordayaa jiidheen, dhaawac yar baa gaadhay, kadibna Hospital baa la geeyey, ninkii aad buu u murugooday, waxaa lagu yidhi: Is daji! wax weyn ma qabtide, hadii ay taadii noqotana geeri loo dhalay’e, ninkii wuxuu yidhi: Geeri kama cabsanaye’e! Aakhiro marka la tago,…
Sii Akhri… “Nin Doofaar Jiidhay!” »
WAALLIDA DALKII KA JIRTA!
Markii aan Soomaaliya tagay, waxyaabaha iga yaabiyay ee aan soo arkay waxaa kamid ahaa:Qof uu mushaarkiisu ka yar yahay $500 oo heysta iPhone 12. Taleefonkaas qiimaha uu Soomaaliya ka joogay waa $1200 ama ka badan. Hadda ayaan sii fajacay markaan arkay qof aananba shaqeynin (Baagamuuddo) oo iPhone 13 oo aan wali Soomaaliya gaarin Mareykanka kasoo…
Sii Akhri… “WAALLIDA DALKII KA JIRTA!” »
HIV qofka qaba isha laguma garan karo
Waxay ahayd ramadaan tobankii ugu danbeeyay, abbaaro 10-kii subaxnimo, waxa dhakhtarka iigu yimi gabadh dhallinyaro ah iyo aabbaheed oo sitta warqadda qofka HIV laga helo loo qoro, ee loo yaqaanno VCT, wejigooda waxa ka muuqday argaggax iyo naxdin, waliba aabbuhu aad ayuu u naxsana. Taasi waxay i gelisey dareen ah inuu isagu yahay qofka qaba…
Sii Akhri… “HIV qofka qaba isha laguma garan karo” »
Waqtiga Kaliisha ee aadka u kulul, waxa dhacda dabayl hanfi kulul leh, oo adhiga saacado gudahood weyd kaga dhigta, oo badhida laga waayo idaha, nin waqtigaa adhigiisii geed hadh geliyay, ayaa markuu saacad ka dib dareeriyay, arkay lax badhi weyneyd oo ay dabayshii ka fuuqsatay, oo aan lagu ogeyn in yarna, markaasuu yidhi. “Wallaahi iyo…
Sii Akhri… “Badhi-Ka-Siib” »
Magtii waraabaha meel hala saarro
Waxa la yidhi beri baa nin reer miyi ihi soo xareeyey awr baadi ah , awrkii oo mudaba uu hayay ayaa habeenkii dambe isagoo seeto ku daaqaya waraabe diley , dabeeto ninkii awrku kasoo lumay ayaa raqdii awrka dul yimi ka dibna awrkii waraabihii buu raadiyey ka dibna diley, ninkii waraabaha diley dabeeto wuxuu qabsaday…
Sii Akhri… “Magtii waraabaha meel hala saarro” »
QUWAAXAA HA NAGADI 😂😂😂
Nin reer Baay ah ayaa geed weyn salka ka jaray. Waxaa la su’aalay maxaad ku sameyneysaa geedka? Wuxuu ku jawaabay HAANAA FADEE (haan baan ka rabaa). Cabirkii haanta markii uu dhaafay ayaa la weydiiyay haan dhaaftaye sidee wax kaa yihiin? Wuxuu yiri DHIILAA FADEE (dhiil baan ka rabaa). Xoogaa ka dib ayaa hadana la yiri…
Sii Akhri… “QUWAAXAA HA NAGADI 😂😂😂” »
Vacancy: Representative (D-2) Mogadishu, Somalia
Representative, D-2, Mogadishu, Somalia
Job no: 546550
Categories: Representative, Senior Leadership Vacancies
Adduunyo Waa Loo Dad Badsadaa !!!
Nin oday ah baa maanta wuxuu iiga sheekeeyay sababta uu ugu hal-qabsado markasta Aduun waa loo dad badsadaa… Wuxuu ii sheegay in sannadkii 1980-kii isagoo jooga magaalada Qaahira ee dalka Masar, oo ay hal qol ku degen yihiin 4 wiil, bishuna ay dabayaaqo tahay, oo aysan ijaarkii/kiradii gurigana aysan haysan, ileyn ma shaqeeyaan cid dibada…
Sii Akhri… “Adduunyo Waa Loo Dad Badsadaa !!!” »
Habaarkii Ku Dhacay Magaalada Daba-Goreyaale !
Magaaladan mucjiso ayaa ka dhacday muddo haataan laga joogo lixdan sano iyo dheeraad. Nin dadkii reer guuraaga ahaa ka mid ah, degenaana miyiga magaalada, laguna magacaabi jirey (Ina Xoosh Baraar) ayaa waxa ka umushay xaaskiisii, biyo la’aan ayuu reerkuna ahaa. Awr dhaan ah ayuu soo kaxeeyey, si uu umusha ugu soo dhaamiyo, wax uu soo…
Sii Akhri… “Habaarkii Ku Dhacay Magaalada Daba-Goreyaale !” »
Wuxuu Karaamadiisii Mar Hore Ku Iibsaday $700!
Waagii uu Ingiriisku gumeysanayay Hindiya, ayaa Sarkaal Ingiriis ah wuxuu dharbaaxay nin Hindiyaan ah, oo amar-diiddo sameeyay. Hindigii oo xanaaqay ayaa Sarkaalkii ka aarsaday, kuna dharbaaxay dadka dhexdooda. Sarkgaalkii oo dareemaya in la bahdilay ayaa ku laabtay saldhigga, wuxuuna Taliyihiisa ka codsaday in ninka la ciqaabo, si aysan Hindidu mar dambe ugu soo dhiirran Askarta…
Sii Akhri… “Wuxuu Karaamadiisii Mar Hore Ku Iibsaday $700!” »
Wuxuu Ku Diray Kuu Wax Weydiisanayay
Nin ayaa soo galay Masaajid si uu Alle wax u weydiisto, kadibna intii uu weydiisan karayay markii uu dhameystay, ayuu waraaq ku qoray ducadii, kadibna kitaab Quraan ah ayuu ku dhex riday warqadii, isaga oo u qasdiyaya inuu Alle u diray ducadiisii, kadibna wuxuu u baxay istijo iyo weyso. Mid kale oo masaajidka isna fadhiyay,…
Sii Akhri… “Wuxuu Ku Diray Kuu Wax Weydiisanayay” »
Magaallada Diridhaba (Dir Dhab Ah) Maxaad Ka Taqaan?
Magaalada Diridhaba waxaa la aasaasay 1902-dii marki magaalada uu soo gaaray iyada oo caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa u jirta 525 km. Odayaasha waaya aragga ah ee magaaladaasi waxay sheegeen wixii ka horreeyey 1902-dii magaaladu ineysan ahayn wax magaalo lagu tilmaami karo, balse ay ahayd tuulo yar oo ay dhirtu ku badan tahay biyana ay…
Sii Akhri… “Magaallada Diridhaba (Dir Dhab Ah) Maxaad Ka Taqaan?” »
Maxaad Ka Ogtahay Dilkii CabdulRashiid Cali Sharmaake
Waxa Qoray: Yuusuf Shaacir Qisadan waxaa iiga sheekeeyay Xuseen Yalaxle oo aan maanta kula kulmay magaalada Burco waxaanu yidhi Xiligaa madaxwaynaha la dilay waxaan hudheel cunto ku haystay magaalan Burco, Waxaana xidhiidh fiicani naga dhaxeeyay ciidanka Bilayska Burco, saraakiishii bilayska ayaa waxay ii keeneen askarigan dilka gaysan doona, waxaanay ii sheegeen in ay bixinayaan kharashkiisa,…
Sii Akhri… “Maxaad Ka Ogtahay Dilkii CabdulRashiid Cali Sharmaake” »
Qofka Dabeecadiisa Dhabta Ah, Marna Isma Bedesho
Rumeyso: Qofka Dabeecadiisa Dhabta Ah Marnaba Isma Badesho Wax Walba oo Dhaca, Nin Ayaa Arkay Mas Ku Dhacay Dab, una Dhaw Inuu Ku Dhinto Dabka, Wuxuu Go’aansaday Ninkii Inuu badbaadiyo Maska, markuu u dhaqaaqay badbaadintii Maska, banaankana uga soo saaray dabkii, ayaa Maskii wuxuu qaniinay gacantii naxariista u fidisay, kana badbaadisay dhimashada, ninkii xanuunkii…
Sii Akhri… “Qofka Dabeecadiisa Dhabta Ah, Marna Isma Bedesho” »
Maxaa laga filan karaa Gudoomiyaha cusub…
W/Q: Bashiir Cali Cabdi (Bashiruddin) – B.Sc., M.Sc (Insaniah), CIFP (INCEIF) Bismillaah! Labba Cali ayaa la kala wareegey Baanka Dhexe ee Somaliland (BoS), inna cali-na wuu idiinka warami doonaa! Marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ee suuban, igana gudooma iyadda oo diiran. Salaan kadib, waxa aan maanta qalinka uqaatey in aan soo dhaweeyo Gudoomiyaha…
Sii Akhri… “Maxaa laga filan karaa Gudoomiyaha cusub…” »
Copyright © 2022 QORMOOYIN SOOMAALI AH.